Bromley Iweghachite College Mgbụsị akwụkwọ 2021 Prospectus - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ahụike Uche Bromley > Ọrụ Bromley Iweghachite > Bromley Iweghachite College Mgbụsị akwụkwọ 2021 Prospectus
Bromley Iweghachite College Mgbụsị akwụkwọ 2021 Prospectus
Mgbụsị akwụkwọ-Oyi 2021
Usoro nkuzi kọleji Bromley bụ n'efu ma ghe oghe maka onye ọ bụla na -agbake site na nsogbu ahụike uche nke bi, na -arụ ọrụ ma ọ bụ debara aha ya na GP na London Borough nke Bromley.
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na, na-esochi mkpọchi mkpọchi Covid-19, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ nkuzi anyị ihu na ihu.
Ịghọta àgwà gị
Ihe ọmụmụ onwe onye
Oge: 4 x 2 oge nnọkọ
Onye nkuzi nkuzi: Charlie Carpenter
Ebe: Ụlọ Obodo, South Street, Bromley, BR1 1RH
AFỌ: Kwa Tuesday, 9 Nọvemba - 30 Nọvemba 2021
Naanị ihe na -akpụzi ụdị mmadụ anyị na kedu ka ọdịdị anyị si emetụta ndụ anyị?
Àgwà anyị pụrụ iche, akụkụ e ketara eketa, akụkụ nke ahụmịhe ndụ kpụrụ. Ọ na -akọwa anyị dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu ma na -arụ ọrụ dị ike n'ịchọpụta ụzọ ndụ anyị.
Usoro ogbako a na -enyocha ụwa dị mgbagwoju anya nke ụdị mmadụ n'ụzọ dị jụụ na nke na -atọ ụtọ, na -atụ anya inye nghọta miri emi banyere ihe na -eme gị akara.
Oge: 8 x 2 awa
Ndị nkuzi nkuzi: Sally Baxter na Emily Randall
Ebe: Chọọchị Baptist Orpington, Okporo Ọdụ, Orpington BR6 0RZ - map
AFỌ: Kwa Tuesday, 26 Ọktọba - 14 Disemba
Otu a bụ ohere izu ike maka ụmụ akwụkwọ ịbịakọta ọnụ wee nwee ọńụ egwuregwu tebụl tebụl n'okpuru anya nkwado nke ndị egwuregwu abụọ nwere ahụmịhe ga-anọ na ndụmọdụ inye.
Tenis tebụl bụ ụzọ dị mma iji zụlite mgbatị anụ ahụ. Oge ndị a dị mma maka ndị mbido na ndị egwuregwu nwere ahụmihe.
Njem nwayọ, Beckenham
Oge: 6 x 1 oge nnọkọ
Ndị nkuzi nkuzi: Jon Paul Mountford na Angela Smith
Ebe: Ọnọdụ dị iche iche na Beckenham
AFỌ: Tuzdee ọ bụla, 7 Septemba - Ọktọba 12
Oge: 10.30am - 11.30: XNUMXam
Ije ije nwayọ nwayọ naanị nkeji iri abụọ kwa ụbọchị egosila na ọ na -emetụta oke uche na anụ ahụ mmadụ. N'ụzọ dị ịrịba ama, ọ nwere ike inye aka belata nrụgide, belata nchekasị ma wusie ike gị.
Ebumnuche nke otu a bụ iwebata, n'ụzọ dị jụụ na nke nkịtị, ije ije na gburugburu obi ụtọ.
Olile anya bụ ka a na -agba otu abụọ, otu na mpaghara Kelsey Park nke Beckenham, nke ọzọ na mpaghara Chislehurst, mana anyị ga -aza arịrịọ ma ọ bụrụ na enwere mmasị zuru oke kọleji ahụ ga -arụ ọrụ otu nke atọ n'ebe ọzọ na Borough.
Njem ọ bụla ga -ewe ihe dị ka nkeji 50.
Ịga ije nwayọ, Orpington
Ndị nkuzi nkuzi: Charlie Carpenter na Angela Smith
Ebe: Ọnọdụ dị iche iche na Orpington
AFỌ: Fraịdee ọ bụla, 10 Septemba - Ọktoba 15, 2021
Oge: 11AM - 12pm
Nke a bụ ije ije nwayọ na nkata dị na ndịda mpaghara. Ndị otu Fraịde ga -enyochakwa River Cray dị nso na gburugburu ụlọ ụka Saints niile.
Ndị otu a na-aga ije dabara adaba maka ndị anaghị agagharị agagharị.
Ndị nkuzi nkuzi: Jon Paul Mountford
Ebe: Ọnọdụ dị iche iche n'ime mpaghara Bromley
AFỌ: Mọnde ọ bụla, Septemba 6 - Disemba 6, 2021
Oge: 10.30AM - 12.30pm
Nzukọ ndị a na -eje ije ga -adị ntakịrị ma tinye ebe dị iche iche n'ofe mpaghara. Enweghị akụrụngwa ọkachamara ọ bụla mana kwadebe maka ụzọ nke ihu igwe nwere ike imetụta ya.
Oge: Tuesday ọ bụla na -aga n'ihu
Ndị nkuzi nkuzi: Heather Collyer na Liz Litton
Ebe: Ala Sandford Road, Bromley South, BR2 9AN
AFỌ: Na Tuesday ọ bụla
Oge: 11AM - 2pm
Nke a bụ ohere na -enye ọ forụ maka ndị nwere mmasị ịkọ ubi ga -achọ ịmụba ihe ọmụma ha ka ha sonye na ọrụ ugbo na -aga n'ihu.
Otu a na -edozikwa oke abụọ dị iche iche nke enyere ọtụtụ osisi, gụnyere okooko osisi, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị nro.
Ulo ndị ahụ dị nso na ọdụ Bromley South ma dị mfe ịnweta.
Oge: 6 x 2 oge nnọkọ
Onye nkuzi nkuzi:Jon Paul Mountford
Ebe: Nkume steepụ, 38 Mason's Hill, Bromley BR2 9JG
AFỌ: Tuzdee ọ bụla, 2 Nọvemba - Disemba 7, 2021
Oge: 1.30pm - 3.30pm
Batik bụ usoro Indonesian nke iji ncha na-egbochi wax na-etinye akwa ahụ niile. Usoro a sitere n'agwaetiti Java, Indonesia.
A na -eme Batik ma ọ bụ site na ịpị ntụpọ na ahịrị na nguzogide site na iji ngwaọrụ a na -akpọ canting, ma ọ bụ site na ibipụta nguzogide na stampụ ọla kọpa a na -akpọ okpu.
Bịa soro mụta ụdị nka ọhụrụ. Ohere nwere oghere iji dowe gburugburu yana nchekwa.
Okwu mmalite maka ịse foto
Oge: 6 x 1.5 oge nnọkọ
Onye nkuzi nkuzi: Jon Paul Mountford
Ebe: Ọnọdụ dị iche iche
AFỌ: Kwa Mọnde, 27 Ọktọba - 8 Nọvemba 2021
Ọzụzụ ọhụrụ a na -atọ ụtọ na -eji igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ekwentị iji wulite nkà dị na ụmụ akwụkwọ nwere mmasị na foto mana enweghị ahụmịhe gara aga.
N'iji nchikota nkuzi, ngosi na mmegharị aka, nkuzi a ga-enyocha usoro foto dị mkpa na nchegbu nka metụtara ime foto. Ndị a gụnyere njikwa igwefoto, ihe mejupụtara, iji ọkụ eme ihe nke ọma na ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji zụlite ọhụụ foto gị.
Ụgbọ njem na ebe a na -adọba ụgbọala
Anyị na -arịọ ka ụmụ akwụkwọ kọleji mgbake jiri ụgbọ njem ọha gaa nkuzi kọleji mgbake n'ihi na ebe a na -adọba ụgbọala nwere oke na saịtị niile.
Bromley Lewisham & Greenwich Mind parking dị ka ndị a:
Beckenham (okporo ụzọ 20b Hayne)
Ebe a na -adọba ụgbọala na Bromley, Lewisham na Greenwich Mind, Beckenham nwere ike bụrụ nke amachaghị n'oge nkuzi kọleji mgbake emere na Hayne Road. Biko gwa nnabata Beckenham Center na Hayne Road ma ọ bụrụ na ị na -adọba ụgbọala.
Beckenham Center na -eje ozi site n'okporo ụzọ ụgbọ ala 194, 227, 354 na 358.
Beckenham Junction ọdụ ụgbọ oloko na nkwụsị tram bụ nkeji 10 - 15 na -aga ebe a.
Nku steepụ, Bromley (38 Masons Hill)
Ọ dị nwute na ndokwa ebe a na-adọba ụgbọala nwere oke oke, ọ dịghịkwa maka ụmụ akwụkwọ ewezuga ndị njide Badge. A na -adụ ụmụ akwụkwọ nwere nsogbu ngagharị na ndị na -eche banyere nhazi ụgbọ ala ka ha kpọtụrụ ndị nhazi kọleji mgbake na 01689 603577 (Charlie Carpenter) ma ọ bụ 07718 445559 (Lorraine Gordon).
Ụzọ ụgbọ ala 61, 261, 208, 336, 358 na 320 na -eje ozi na saịtị ahụ.
Ụlọ Anchor, Orpington (okporo ụzọ 5)
Enweghị ndokwa ebe a na-adọba ụgbọala na Anchor House. A na -adọba ụgbọala na etiti obodo Orpington ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ ala Tesco dị nso.
Ọdụ ụgbọ oloko Orpington dị nkeji 15 site na ebe mgbakọ ahụ
Anyị na-echekwa ma hazie data nkeonwe gị n'usoro iwu 1998 Data Protection Act na 2018 General Data Protection Regulations. Biko gụọ amụma nzuzo anyị.
Bromley Iweghachite College,
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind, 38 Mason's Ugwu, Bromley, Kent, BR2 9JG
07745 182738 ma ọ bụ 07718 445559.
Emelitere ụdị nke mmemme kọleji Bromley ikpeazụ na 24 Ọgọst 2021.